Njem nlegharị anya Seychelles "North America Annual Roadshow" na -aga nke ọma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Njem Nleta Seychelles "North America Kwa Afọ Roadshow" Na-aga Mebere
Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Iwughachi • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Njem Nleta Seychelles "North America Kwa Afọ Roadshow" Na-aga Mebere
Njem nlegharị anya Seychelles mere ihe dị iche iche n'afọ a maka "North America Annual Roadshow" n'ihi COVID-19. Mgbe ọnụnọ afọ abụọ gasịrị, a na-eme ihe ngosi okporo ụzọ, nke na-agakarị n'obodo 2 US, na Wenezdee, June 4, na mgbe ọ mechara nke ọma, a ga-eme ihe omume nke abụọ na Wednesde, Ọgọst 25, 18.
Njem nlegharị anya nke Seychelles gosipụtara ụzọ ngosi kwa afọ nke North America n'ụdị mebere n'afọ a.
Enwere ndị ọrụ njem njem 65 US bụ ndị sonyere site na obodo n'ofe US maka ụbọchị ọmụmụ na mgbanwe.
Ndị niile ihe metụtara hụrụ nke a dị ka ihe omume dị mma karịa afọ abụọ gara aga mgbe a kagburu ya na enweghị usoro ọzọ n'ihi COVID-2.
N'ị esonyere ụwa ndị ọzọ n'ịgbaso nyiwe dijitalụ iji rute ndị mmekọ ha, ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya mpaghara si Seychelles, gụnyere Njem Mason, Ọrụ Njem Creole, na onye ọrụ ụgbọ elu Qatar Airways debara aha dị ka ndị ngosi maka ihe omume mebere nke emere site na 7 ruo 9 elekere (Seychelles). oge) na June 25, mgbe ndị ọrụ njem njem 65 US si n'obodo dị iche iche nke United States sonyere maka ụbọchị ọmụmụ na mgbanwe.
Na -eso ezigbo nnabata Njem nlegharị anya Seychelles ndị otu, ndị sonyere na ndị na-eme ihe ngosi gara n'ihu na-eduzi nzukọ otu n'otu nke ha gbanwere ozi gbasara ọnọdụ ahịa dị ugbu a, usoro nchekwa nke ndị na-ahụ maka mpaghara na-arụ ọrụ na Seychelles yana mmepe gbasara ngwaahịa ọhụrụ n'ime ebe ha na-aga.
A na -eme ihe ngosi okporo ụzọ a na nke mbụ kemgbe afọ 2018 kwuru na onye nlegharị anya mpaghara Seychelles Tourism for Africa & America, David Germain kwuru. Maazị Germain kwuru, "Na 2019 na 2020, anyị enweghị ike ịga n'ihu ụzọ ngosi, mana ka ọrịa na -aga n'ihu, anyị kpebiri ịme mmemme ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ojuju nke ndị mmekọ azụmahịa anyị na ndị sonyere sonyere," Maazi Germain kwuru.
Mmasị na Seychelles ka dị elu na United States n'agbanyeghị ọrịa ọjọọ, ọ kwadoro, ọkachasị n'etiti ndị njem na -aga mba dị anya na mba Africa na Middle East na ezumike, ma mesịa gaa Seychelles dị ka mgbatị maka ezumike ha. Ndị ọbịa 1,934 si United States gara Seychelles ruo afọ a ruo 18 Julaị.